FAA'IIDOOYINKA KAADHKA DHALASHADA MUWAADINKA (qaybtii 2aad) | Dhaymoole News
FAA'IIDOOYINKA KAADHKA DHALASHADA MUWAADINKA (qaybtii 2aad)
January 28, 2016 - Written by wariye999
Kaadhkani wuxuu noqon doonaa u jeedo guud oo ina midaysa; waana mid kamida siyaabaha aynu qabyaalad kaga guurikarno, waayo imika (identity)geenu waa qabiil laakiin hada wixii ka dambeeya wuxuu noqondoonaa qaran. Qaranimada afkuunbaynu imika ka sheeganaa laakiin wixii hada ka dambeeya qaranimadu waxay noqon doontaa wax la taaban karo oo muuqata oo (tangible) ah, taasoo aynu kaga soocmi doono cida aan dalka u dhalan, dhexdeenana aynu ku midoobi doono. Kaadhkani muwaadinka wuxuu siinayaa tixgalin iyo qiime dheeraad ah oo dhinacyo badan leh sida shaqooyinka iwm, marka loo eego ajanaanibta, lakiin xaga shaqada sidii hore wax badan baa iska badali kara. Oo shaqo muwaadinkii qaban karo aqoonteediina leeyahay, kama shaqaynkaro qof aan wadanka u dhalan.
Sidaadarteed, hadaynu tusaale u soo qaadano waxyaabaha dadka mideeya, waxa kamida caqiido, jinsiyad, iyo qabiil, Laakiin inagu waxaynu ku midaysanahay caqiido iyo qabiil. Inta badana qoysas isku tegay waxay ku midoobaan, (jifo), jifooyin isku tegayna waxay ku midoobaan (jilib), jilibyo isku tegayna waxay ku midoobaan (qabiil) qabiilo isku tegeyna waxay ku midoobaan (qoomiyad), qoomiyado isku tegeyna waxay ku midoobaan (qaran) sida itoobiya oo kale, laakiin soomaalidu waa qabaa’il, qoomiyadnimona way ku midoobi wayday, oo taa hore ayaa la inoogu khiyaameeyay hadaynu s/land nahay. Sidaadarteed, maanta jilibyada qabiilku ka kooban yihiin waxay ku midaysan yihiin hadaynu qabiil hebel nahay maxaa inoo dan ah, laakiin waxa qabiil lagu qabo waxa ka barako badan waxa qaran lagu qabo, sidaadarteed, waxaynu xaga hore ku soo xusnay in waxyaabaha lagu midoobaa ay kala yihiin caqiido, qabiil iyo jinsiyad, sidookale waxaynu tilmaanay waxa aynu ku midaysanhaay inuu yahay caqiido iyo qabiil, hadaba maanta halkii qabiilka waxaynu ku badalaynaa jinsiyad aan afka ahayne, la taaban karo waana kaadhka dhalashada.
Sikastaba ha-ahaatee, kaadhkan dhalashadu wuxuu meesha ka saarayaa shaqadii uu qabiilku qaban jiray, culayskii qabiilka saarnaana qarankaa la wareegaya, waxaynu qaran mida ku noqon karnaana waa inagoo yeelana ujeedo guud oo ina midaysa, ujeedadii aynu ku midoobi lahayna, maantay taagantahay oo aynu qabiil iyo qabyaalad ka xoroobi karnaaye qaata kaadhka dhalashada isna diwaangaliya.
Lasoco qaybaha dambe……………..
Gar-yaqaan Maxamed Cabdi Kariin Axmed (Shiil)